DigiKam: rakanakisa kunyorera maneja nekugadzirisa mifananidzo | Linux Vakapindwa muropa
DigiKam: rakanakisa kunyorera maneja nekugadzirisa mifananidzo
DigiKam ndeye yakavhurwa sosi application iyo inopa vashandisi mhinduro kupinza uye kubata mapikicha edhijitari kune iyo KDE desktop. Ichi chishandiso chinosanganisira yemufananidzo mupepeti uye murongi zvikamu, izvo zvinogona kuwedzeredzwa zviri nyore kuburikidza neyakavakirwa-mukati uye plug-in.
digitikam Iyo inokwanisa kuronga kuunganidzwa kwemifananidzo mune maforodha, nemisi, kana nemateki. Iyo inokutendera iwe kuti uwedzere makomendi uye ratings kumifananidzo, tsvagisa neruzivo urwu, uye chengeta izvi zvekutsvaga sekunge iwo maforodha
Uyewo inokutendera kuti ugadzire nyore mapikicha akadai sekucheka, kutenderera, kugadzirisa zvekare ruvara, nezvimwe. Uchishandisa Kipi (KDE Image Plugin Interface), inopa mukana wekuwedzera mashandiro ayo.
Makiyi akakosha anosanganisira red-eye correction, kupenya, kusiyanisa, gamma, hue, kuzadza uye kupenya kururamisa, color balance, color inversion, auto-rakakodzera ruvara, chirimwa chiyero, yemahara goho, dema uye chena uye kiyi inoshandura ichishandisa macurves ekugadzirisa, kutenderera uye kubhenekera.
Neichi chishandiso, ivo vanozokwanisa kuendesa mifananidzo, kuronga kwavo kutora mifananidzo, kuona mifananidzo, kugadzirisa uye kuwedzera mapikicha, kugadzira masiraidhi ekuratidzira uye makarenda, kupurinda uye kugovana kwavo zvisikwa zvemifananidzo vachishandisa ewebhu webhu masevhisi, mifananidzo yeemail, uye zvimwe zvakawanda. .
Zvimwe zveapamberi maficha ndeaya:
16-bit / ruvara / pixel rutsigiro rwemufananidzo
Native JPEG 2000 kutsigira
Tsigiro yemanotsi ekugadzira uye metadata yeIPTC
Zvigadziriso zvemberi zvekutsikisa kwemufananidzo wakasvibirira (RAW)
Kurumidza kuona mbichana
RAW mufananidzo metadata rutsigiro
Tafura yechiedza kuti uenzanise zviri nyore mifananidzo yakafanana
1 Nezve iyo nyowani beta yeDigikam 6.0.0
2 Maitiro ekuisa Digikam pane Linux?
Nezve iyo nyowani beta yeDigikam 6.0.0
Vagadziri veapp ichangoburitsa vhezheni itsva beta, iyo inenge ichipinda mubazi rayo idzva 6.xx
DigiKam 6.0 Beta inosanganisira kupinza / kutumira kunze zvigadzirwa, zvinosanganisira LightTable uye showFoto, rutsigiro rwemamwe makamera uye maRAW mafaeraYakareruka, OAuth yekusimbisa webhu masevhisi pamwe uye nezvimwe zvakasiyana zvekuwedzeredza kune ino inozivikanwa yehunyanzvi manejimendi manejimendi software.
Muchidimbu, iri kuuya vhezheni 6.0.0 inotaridzika kuvimbisa uye ichaunza zvimiro zvitsva senge:
Yakazara rutsigiro manejimendi evhidhiyo mafaera anoshanda semifananidzo.
Zvishandiso zveWebhu muLightTable, mufananidzo mupepeti uye showFoto kupinza / kutumira kusangana kweese.
RAW faira kududzira nyowani injini makamera anotsigirwa.
Kufanana data kunochengetwa mune rakasiyana faira.
Yakareruka sevhisi webhu yekusimbisa uchishandisa OAuth protocol.
Zvishandiso nyowani zvekuburitsa kunze kwewebhu masevhisi kuPinterest.
Iko kugona kwemurume kugadzirisa zvekare icon inoratidza zvemukati.
Pamusoro peizvi, kodhi yekushandisa yakanatsiridzwa nezvakaitwa kudzikisira kutsamira kwekunze zvakare kuitira kurerutsa kushandiswa kwekuvaka, kupakata nekuchengetedza kwemakore anotevera.
Maitiro ekuisa Digikam pane Linux?
Kana iwe uchida kuisa ichi chishandiso pane ako masystem tinogona kuzviita zvakapusa.
Izvo zvakaringana kutitungamira kune inotevera chinongedzo.
Pano tinogona kurodha pasi iyo faira "AppImage" yechishandisoChero imwe yakagadzikana vhezheni (5.9.0.01) kana iyo nyowani beta vhezheni (6.0.0).
Ivo vanofanirwa kurodha vhezheni yavo sisitimu yekuvaka.
Ivo vanokupa iwe ita mvumo ne:
sudo chmod a+x digiKam*.appimage
Uye ivo vanomhanya ne:
Iyo digiKam interface inonzwisisika, kunyanya kana vari vashandisi ve KDE. Kugovera zvishandiso zveichi chishandiso kuri nyore. Kuruboshwe pane mapaneru anodzora maitiro aunoona iwo mafoto, pakati pane iwo mafoto pachawo, uye kuruboshwe kune mhedzisiro uye mafirita.
Yekutanga default maonero ndeye faira system yekutarisa, kutanga kubva pane chero dhairekitori iwe yaunotsanangudza seyako faira dhairekitori panguva yeDigiKam kuisirwa.
DigiKam inoreva kune madhairekitori ayo ainowana mukati meye dhairekitori remufananidzo searubhu, uye inoparadzanisa yega yega faira rezvifananidzo, pamwe neyakajairika metadata pamwe neDigiKam metadata inoita kuti iwe uwedzere, mune tichaona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » DigiKam: rakanakisa kunyorera maneja nekugadzirisa mifananidzo
Canonical Inoburitsa Nyowani Kernel Dzokorora kweAkatsigira Ubuntu Zvinyorwa
Windows 95 yeGnu / Linux ikozvino yavapo